General English - Sekolin'ny fianarana teny Central, Cambridge
Tetik'asa sy sosialy
Ny vidin'ny tetik'asa antenaina
Hihaona ny ekipanao
Hihaona amin'ny sekolinao
Courses izay atolotra
Hizaha ny halehibenao Anglisy
Ahoana ny fisoratana anarana
Ahoana no handraisanao anjara?
Fandraisana an-tsoratra PDF
Hiantsena na haba
Mifandray na mandoa anay
Ny fandaharam-potoana anglisy dia ora 15 isan-kerinandro isaky ny maraina amin'ny fanombohana 09: 30 ary vita amin'ny 13: 00 miaraka amin'ny fiatoana kafe amin'ny 11: 00.
Mampiasa boky samy hafa * izahay mandritra ny taona, avy amin'ny taranja Elementary ho Advanced. Misy fomba maro ahafahanao mampihatra ny fiteninao sy ny fihainoanao ary ny fanononana, ny voambolana, ny famakiana, ny fitsipi-pitenenana ary ny soratra. Isan-kerinandro ny mpampianatra anao dia hametraka fampahalalana momba ny kilasy eo amin'ny takelaka.
Amin'ny alatsinainy dia handinika asa ianao manomboka amin'ny herinandro mialoha na handramana fitsapana fandrosoana isam-bolana. Azonao atao ihany koa ny mianatra lohahevitra amin'ny fiteny manokana toy ny matoanteny verbal na ny fomba fiteny tsirairay.
Any amin'ny faran'ny herinandro dia manana fahafahana hanombantombanana lesona ianao ary afaka mangataka isam-pandrindrana isam-bolana miaraka amin'ny iray amin'ireo mpampianatra anao.
Azonao atao ihany koa ny manao fanadinana (ho an'ireo mpianatra manao fanadinana toy ny KET, PET, FCE, CAE, CPE na IELTS).
Ireo mpianatra amin'ny fotoana maharitra izay nianatra nandritra ny herinandro 2 na mihoatra dia hahazo ny taratasy fanamarinana sy tatitra any amin'ny faran'ny dia.
* Tsy misy sarany ho an'ny boky fianarana raha tsy very na simba.
Ny fandaharam-potoana anglisy dia ora 15 isan-kerinandro isaky ny maraina manomboka amin'ny 09: 30 ary vita amin'ny 13: 00 miaraka amin'ny...	Hamaky bebe kokoa
Ireo mpianatra maniry ny handany fotoana bebe kokoa amin'ny fianarana amin'ny teny Anglisy dia afaka misoratra amin'ny fianarana intensive anglisy (ora 21 isan-kerinandro)....	Hamaky bebe kokoa
FITSARANA AFRIKANA Afaka manomboka ny fianarana ny tolakandro ianao isaky ny alatsinainy aorian'ny nandraisanao ny fitsapana. Ny tolakandro...	Hamaky bebe kokoa
Manomana mpianatra amin'ny fanadinana amin'ny ambaratonga isan-karazany mandritra ny taona isika. Ireo fanadinana ireo dia napetraky ny Cambridge English...	Hamaky bebe kokoa
Sekoly miteny sekoly, Cambridge
Ny Centre Stone Yard
© 2017 Central School, Cambridge